होश गरौं कस्तो अवस्थामा पनिर खान घातक हुन्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
होश गरौं कस्तो अवस्थामा पनिर खान घातक हुन्छ ?
हाम्रो दैनिक खाने खानामा प्रोटिन हुनु अति आवश्यक छ । यो प्रोटिन विशेषगरी पनिरमा पाइने गर्दछ । यसको सेवनले शरीरमा आवश्यक प्रोटिनको मात्रा पुर्याउनुको साथै निरोगी र सुन्दर बनाउन पनि सहयोग गर्छ ।
पोषणविद् नेहा चन्दका अनुसार नियमित पनीर सेवन गर्दा मुटुरोगका साथै क्यान्सरको जोखिम घटाउँछ । पनीरले दाँतलाई बलियो बनाउन पनि सहयोग गर्छ । तर, पनीर खाने सही समय कुन हो यो जान्न जरुरी छ ।
याे पनि पढ्नुस समयमा सुत्केरीले उपचार पाएनन्
पनीर कहिले र कसरी खाने–दिउँसो जुनसुकै समयमा पनीर सेवन गर्न सकिन्छ । तर, सिमित मात्रामा मात्र खानु राम्रो हुन्छ ।
– राती सुत्ने समयमा पनीर नखाने तर, सुत्नुभन्दा दुईघण्टा अगाडि सेवन गर्न सकिन्छ ।
– व्यायम गर्नुभन्दा पहिले र पछि पनिर खानुहुँदैन । व्यायमपछिको पनिर सेवनले पाचन पक्रियालाई प्रभावित गर्छ ।
याे पनि पढ्नुस नियमित सेक्स नगर्दा निम्तिने विपत्ति !
–शरीरको तौल नियन्त्रण र फिट राख्न सन्तुलित मात्रामा पनिर सेवन फाइदाजनक हुन्छ ।
ट्याग्स: health, panir